सरकार, मलाई एक सिलिन्डर अक्सिजन दे! – Health Post Nepal
२०७८ वैशाख ३० गते १३:१६
बुधबार दिउँसो भैरहवाको मेडिकल कलेजबाट एकजना चिकित्सकले फोनमा आफ्नो निरिह अवस्था सुनाउनुभयो– ‘आइसियुमा गम्भीर बिरामीहरू अक्सिजनकै भरमा बाँचेका छन्। कोभिड वार्डमा पनि अवस्था त्यस्तै छ। अहिले ४ बजेतिर अक्सिजन सकिँदैछ। अस्पताल प्रशासनले बिरामीका आफन्तलाई आफैंले केही बन्दोबस्त गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ। कस्तो पीडादायी’
उनले भनेका थिए– ‘अब हामीले ७० वर्षभन्दा माथिका बिरामीलाई भेन्टिलेटर र एचडियुमा नराख्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो।’
उनको यो भनाइ निकै तीतो र निर्मम लाग्न सक्छ, तर अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरिको परिस्थितिले नचाहेर पनि यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था बन्दैछ। इटालीमा महामारीका कारण स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्न नसक्ने भएपछि सरकारले निर्ममतापूर्वक यस्तो अभ्यास गरेको थियो।
मंगलबार राति ट्विटरको स्पेसमा चिकित्सकहरूबीचको छलफलमा नेपालका विभिन्न जिल्ला र अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले यतिबेला भोगिरहेका अनुभव रातभरि निद्रा नपर्ने खालको थियो। अक्सिजन आपूर्ति हुन नसक्दा अस्पतालहरूले नयाँ बिरामी लिन छाडिसकेका छन्। विशेषतः निजी अस्पतालहरूले कोभिड–१९ का बिरामीलाई भर्ना नलिने औपचारिक सूचना जारी गरिरहेका छन्। सरकारले मंगलबार नै काठमाडौं उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड केन्द्रित अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय ग¥यो। तर, सरकारी अस्पतालमा पनि अक्सिजन अभावमा बिरामीले सकस भोगिरहेका खबर आइरहेका छन्।
सर्वसाधारणको उपचार हुने भक्तपुर अस्पतालदेखि हुनेखानेको उपचार हुने ग्रान्डीजस्ता अस्पतालमा समेत अक्सिजन सकिएकाले बिरामीको कन्तबिजोग भइरहेको छ। धेरै निजी अस्पतालले जस्तै ग्रान्डी अस्पतालले पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामी नलिने घोषणा गरिसकेको छ। नर्भिक अस्पतालले पनि वक्तव्य नै जारी गरी अक्सिजनको चरम अभाव भएको र कुनै पनि बेला नराम्रो दुर्घटना हुन सक्ने जनाएको छ।
महिना दिन अघिदेखि हामी भारतमा कोभिड–१९ को नयाँ प्रजातिको संक्रमणबारे भयावह समाचारहरू पढिरहेका छौं। अक्सिजन अभावमा बिरामीले ज्यान गुमाएको देखि अक्सिजन खोजीमा बिरामीहरू भौंतारिनुपरेका दृश्य कम्प्युटरका स्क्रिनमा हामीले पढ्दै आएका छौं। अक्सिजन अभावकै कारण मर्नेको संख्या बढेपछि चिहानमा मात्र होइन, सवारीसाधनको पार्किङ गर्ने खुला स्थानमा समेत लास जलाउनुपर्ने अवस्था बनेको थियो। भारतीय जनताले महिना दिनअघि भोगेका समस्या यतिबेला नेपाली जनताले भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ।
भारतमा अक्सिजनको चरम अभाव भएपछि नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था आए के गर्ने भन्ने विषयमा केही सञ्चारमाध्यमले चासो देखाएका थिए। एकाध सञ्चारमाध्यमले त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी बनाएको समाचारमा भनिएको थियो– ‘तराईका विभिन्न जिल्लामा अक्सिजन कारखाना भएकाले अक्सिजन अभाव नहुने बरु अक्सिजन सिलिन्डर भने अपुग हुन सक्छ।’ (वैशाख १५ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिक)
विशेषतः अक्सिजन उत्पादन गर्ने कारखानाका उद्योगीहरूको भनाइलाई आधार बनाएर उक्त सामग्री तयार गरिएको देखिन्छ। भारतमा अक्सिजन अभाव देखेका नेपालीलाई त्यो समाचारले केही राहत दिएको थियो। नेपालमा भारतकै जस्तो भयावह अवस्था आइनहाल्ने धेरैको चाहना र अपेक्षा थियो। तर, आज नेपालको अवस्था भारतको भयावह अवस्थाभन्दा कति पनि फरक देखिएन। अक्सिजनको अत्यन्त खाँचो पर्ने बिरामीलाई अक्सिजन पनि दिन नसकेपछि अरू उपचारको के अर्थ भयो? चिकित्सकहरू लाचार भएका छन्। भर्खर सेवामा लागेका नयाँ चिकित्सकहरू ‘कस्तो बेला चिकित्सक भइएछ’ भन्दै नमिठो मानिरहेका छन्।
सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अक्सिजन अभाव समाधानका लागि कार्यदल बनायो। तर, कार्यदल बनेको चौथौ दिनमा पनि देशैभरिका अस्पतालमा अक्सिजन अभावका समाचार ओइरहेकै छन्। उद्योगीहरूले मनग्ये हुन्छ भनी दाबी गरेको अक्सिजन निकै खाँचो पर्दा किन सहज आपूर्ति हुन सकेन? भारतमा जस्तै अक्सिजनको कालोबजारी भइरहेको हो कि? वास्तवमै अक्सिजन अभाव भएको हो वा कालोबजारीका कारण मानिसको जीवनमाथि खेलबाड भइरहेको हो?
अक्सिजन सिलिन्डर अभाव हुन सक्ने देखिएपछि सरकारकै आह्वानमा प्रहरीले सम्बन्धित जिल्लाहरूमा अहिले सिलिन्डर बटुल्ने, बिग्रेका सिलिन्डर बनाउने जस्ता काम गरिरहेको छ। महावीर पुनले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रले अक्सिजन सिलिन्डर अभाव हुने छनक पाउनासाथ हिमाल चढ्ने पर्वतारोहीले प्रयोग गर्नेे सिलिन्डरदेखि अन्य उपयोगमा नरहेका सिलिन्डर संकलन थालिसकेको थियो।
मंगलबार उत्तरी छिमेकी चीनले सहायता गरेका अक्सिजन सिलिन्डरमध्ये ४ सयथान नेपालमा आइपुगेको छ। चीनले जम्मा ३ हजार ५ सय सिलिन्डर सहायता गर्ने भएको छ। चीनबाट आएको सिलिन्डरले अभावलाई केही सहज बनाउने छ। तर, समस्या यतिबेला भने अक्सिजनकै देखियो। उद्योगीका भनाइलाई आधार बनाएर पत्रिकामा छापिएका समाचारकै भरमा सरकार अक्सिजनमा केही कमी नहुने भनी ढुक्क बसेको देखियो।
भारतको राजधानी नयाँदिल्ली, उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्र प्रान्तमा अक्सिजनको चरम अभाव हुँदा भारतकै केराला राज्यले अभावले गाँजेका राज्यलाई अक्सिजन पठाएर सहायता गरिरहेको थियो। भारतमा कोभिड–१९ को पहिलो संक्रमित गत वर्ष केरलामा भेटिएका थिए। तर, केरलाले छोटो समयमा नै कोभिड महामारीलाई ज्यादै कुशलतासाथ व्यवस्थापन गर्न सफल भएको देखियो। केरलाको त्यो कौशल भारतमा त चर्चित छ नै, संसारभरि पनि लोकप्रिय बन्यो–‘केराला मोडेल’ का नाममा।
अघिल्लो वर्ष महामारीले उचाइ लिँदा महामारी नियन्त्रण गर्न केरलाको वामपन्थी सरकारलाई कम कठिन भएको थिएन। जसोतसो संक्रमण केही मत्थर भयो। तर, केरला सरकारले जनस्वास्थ्य पूर्वाधार र सावधानीका उपायमा ध्यान दिन भने छाडेन। केरलाले यसबीच अक्सिजनका प्लान्टहरू स्थापना ग¥यो। परिणामतः दोस्रो लहरले केरालालाई कममात्र प्रभावित गर्न सक्यो। त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणालीले प्रभावकारी काम गरेको देखियो। त्यसैकारण गत महिना भएको निर्वाचनमा पिनाराई विजयन नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धनले नै विजय हासिल ग¥यो। केन्द्रीय सरकार चलाइरहेको भारतीय जनता पार्टीले केरलामा एक स्थान पनि हात पार्न सकेन।
भारतले अक्सिजनको चरम अभाव व्यहोरेको केही समयपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले अक्सिजन अभाव सामना गर्न थालेको हो। नेपाल सरकारले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो राखेको भए अक्सिजनको यस्तो चरम अभाव देशले भोग्ने अवस्था हुन्थेन। नेपालसँग तयारी गर्ने प्रशस्त समय थियो। विडम्बना, समय हुन्जेल नेपालका शासकहरू सत्ताकै झगडामा अल्झिरहे।
मंगलबार स्वास्थ्यकर्मीहरूको स्पेस छलफलमा केही चिकित्सकले दैलोमा आइसकेको अर्को एउटा समस्याबारे पनि निकै चिन्ता व्यक्त गरे। संक्रमण दर यसरी नै बढ्दै जाने हो भने आगामी केही दिनमा देशभरि तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव हुने उनीहरूको भनाइ थियो। त्यसो त यो समस्या अहिले नै सघन भइसकेको छ। नेपालगन्जमा कोभिड संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै ड्युटी गरिरहेको समाचारले यतातिर संकेत गरिसकेको छ। यो अवस्था काठमाडौंका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा अहिले सुरु भइसकेको छ। यो क्रम अझ बाक्लो बन्दै जाने देखिन्छ।
‘जब भयो राति, तब बुढी ताती’ भन्ने पाराले काम गरेर महामारीले पुर्‍याउने क्षतिबाट हामी जोगिन सक्ने छैनौं। महामारीसँगको दौडमा सरकार निकै ढिलो भइसक्यो। त्यसको तीतो स्वाद हामीले चाखिरहेका छौं। लकडाउन भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि दैनिक संक्रमण र मृत्यु दर बढिरहेकै छ। बरु अवस्था अझ भयावह बन्दैछ। त्यसको अर्थ स्पष्टतः सरकारी तदारुकतालाई भाइरसले पछारिसकेको छ। अब समाधान एउटै छ, भाइरसको गतिभन्दा सरकारको गति तेजिलो बनाउनु।
सरकारसामु प्रश्न छन्– अझ कतिवटा अस्पतालका चिकित्सकले लाचार भएर सामाजिक सञ्जालमा आँसु चुहाउनुपर्ने हो? अझ कति दिन चिकित्सकहरू आफ्नै आँखा अघि अक्सिजन नभएर बिरामी मरेको टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने हो?
जनता आज सरकारसमक्ष मागिरहेका छन्– हामीलाई विकास र समृद्धि चाहिएन सरकार। यतिबेला श्वास फेर्न अक्सिजन देऊ।
कवि अर्जुन पराजुली लेख्छन्–
तेरो पानी जहाज लैजा
तेरो स्मार्ट सिटी लैजा
मेरो बाको औंठी लैजा, घडी लैजा
सरकार! यी सबैको बदलामा तैंले
मलाई एक सिलिन्डर अक्सिजन दे!